तपाईमा यस्ता लक्षणहरु देखिएका छन् ? याद राख्नुहोस् एचआईभी हुन सक्छ | तपाईमा यस्ता लक्षणहरु देखिएका छन् ? याद राख्नुहोस् एचआईभी हुन सक्छ – हिपमत
काठमाडौं,२३ माघ :असुरक्षित यौन सम्पर्क, संक्रमित आमाले बच्चा जन्माएमा अथवा सुईहरुबाट सर्ने गर्दछ एचआईभी/एड्स । यो रोगबाट विश्वका धेरै मुलुकहरुमा मानिसहरु मृत्युको सिकार भइसकेका छन् । यद्यपी अहिले सम्म यसको पूर्ण रुपमा निदान हुने औषधि भने भेटिएको छैन् ।